February 2, 2018 Rochak Jankarimenstruation, period, sanitary pad, tips
यो पनि पढ्नुहोस् : के कारण हुन्छ नि:सन्तान ? । Reasons Behind Infertility
यो पनि पढ्नुहोस् : के म पुन: कुमारी हुन सक्छु?|Is re-gaining virginity possible?
समस्या नआओस् भन्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको सरसफाई नै हो । महिनावारीको बेलामा मात्र होइन अरु बेलामा पनि यौनांगको सरसफाईमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
यौनांग जहिले पनि सुख्खा राख्नुपर्ने भएकोले पिसाब गरेपछि टिस्यु पेपरले पुछ्ने, दिशा गरेपछि सधै अगाडिबाट पछाडि हात लगेर धुनुपर्छ । जुन पायो त्यहि साबुनको प्रयोग गर्नुहुँदैन र सधै सुतीको कट्टु प्रयोग गर्ने गर्नुपर्छ । यसबाट पिसाब सम्बन्धि संक्रमणबाट पनि बच्न सकिन्छ।